Ampahany amin’ireo vazon’ny ADN efa maro mpankafy ny “Lamesa”, “Toky fitaka” ary ny “Ragga top”, ity farany izay vao haingana tokoa no nakorisa teny anivon’ireo haino aman-jery maro eto an-tanàna.
Ankoatry ny filalaovan’ny ADN ireo mozika tropikaly dia tsy atoro voanjo hadiana amin’ny famolahana ny gadona hafa loko ihany koa izy ireo. Hisy, araka izany, atsy ho atsy ny famoahany bagasy izay aseho anatin’ny fianjaika mampiavaka ny Malagasy ihany koa.
Amperiny amin’ny fiketrehana ny rakim-peony ankehitriny ny ADN ary tsy ho ela ny fiakarana an-tsehatra. Manan-talenta amin’ny famoronana soradihy ihany koa ireo mpikambana eo anivon’ity tarika tanora ity.